ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြုလုပ်ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်း (၂၀၁၀) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညူးခြင်း
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် Make ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်း (2010)
လိင်တစ်ဦးမေ့လျော့ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူ Coolidge Effect ရှောငျ
မကြာသေးမီကရေးသားချက်များသည် (၁) ချစ်သူများသည်၎င်းတို့တွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများအကြောင်းပိုမိုသိလိုသည့်အကြောင်းရင်းကိုဆွေးနွေးထားသည် limbic ဦးနှောက်, (2) ကိုဘယ်လို သိပ်ပြင်းထန်သောဆွ ဦး နှောက်၏အခြေခံအားဖြင့်ဆုလာဘ်အစီအစဉ်သည်သိမ်မွေ့သောခံစားချက်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် ပိုပြီးဆွဘို့အလိုအပျနှင့် (3) dopamine အတက်အကျဟာကားမောင်းဘယ်လောက် Coolidge Effect (လိင်စိတ်နိုးထပြီးနောက်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းသွားခြင်း။ ) dopamine အစွန်းရောက်မှုများကိုသက်သာစေသည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖန်တီးရန်နည်းလမ်းရှိကြောင်းကိုလည်းငါပြောခဲ့ဖူးသည်။ သဟဇာတဖြစ်မှုမြှင့်တင်ရန်.
ငါ Daoist lovemaking အပေါ်တစ်ဦးစာအုပ်ထဲတွင်ဆယ်စုနှစ်အကြာကဒီအယူအဆအပျေါမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ လက်တွေ့ကျတဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံ. စိတ်ကူးများပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက်ကျနော်နောက်ဆုံးမှာအပေါ်တစ်ဦးစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ် karezza-ကြောင့်ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မလုပ်နေတာခဲ့ကြသည်ဘယ်အရာကိုဖော်ပြထားကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ Karezza ချစ်ခင်ခြင်းနှင့်အပန်းဖြေအများကြီးနဲ့အတူနူးညံ့သိမ်မွေ့လိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အော်ဂဇင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်မရှိဘဲ။ (ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်နေဆဲရှားပါးအခါသမယအပေါ်ဖြစ်ပျက်။ )
ဒီအလေ့အကျင့်ပုံခေတ်ကာလမှတဆင့်အများအပြားအမည်များအားဖြင့်သွားထောင်စုနှစ်များအတွက်ဆက်ဆံရေးပိုမိုနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်ကိုက်ညီရန်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားများပါဝင်သည်: Daoist dual-စိုက်ပျိုးခြင်း, le ယာဇာမြို့ (cortezia), amplexus reservatusဒါကြောင့်ထွက်, transorgasmic လိင်နှင့် (၎င်း၏ပိုပြီးစိတ်အေးလက်အေးမူကွဲများတွင်), tantra ။ အကျိုးကျေးဇူးများကိုမြည်းစမ်းဖို့, နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်နေ့စဉ်အလေးပေးပြောကြား Bond အပြုအမူတွေ (ထိုကဲ့သို့သောအသားအရေ-to-အသားအရေအဆက်အသွယ်, နူးညံ့သိမ်မွေ့လေဖြတ်, Spoonful စများနှင့်ရံဖန်ရံခါနူးညံ့သိမ်မွေ့လိင်ဆက်ဆံမှုအဖြစ်) နှင့်သုံးပတ်ကြာအော်ဂဇင် sidestep ။ အတွက် (အသေးစိတ် Cupid ၏အဆိပ်မြှား - အကျင့်မှသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှသဟဇာတဖြစ်သည်.)
အစပိုင်းမှာတော့ orgasm ကိုမရည်ရွယ်တဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုဟာ ... …WTF ?!"ဒါပေမယ့်ဒါကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်အနောက်နိုင်ငံများမှကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိဘက်လိုက်မှုများကိုသေချာစွာပြဌာန်းပြီး၊ အော်ဂဇင်မပါဘဲလိင်ကိစ္စကိုပင်အမှတ်တံဆိပ်ပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်" paraphilia စကားမစပ်, karezza ထူးဆန်းတဲ့ bedfellows ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Pius XII ကပြစ်တင်ရှုတ်ချ။ သူ့အချိန်မှာတော့ပြင်သစ်နှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ကက်သလစ် extolling ခဲ့ကြသည် amplexus reservatus (ကာရာဇီ) သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်တရားဝင်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေနှင့်ပိုမိုစုံလင်သော၊ ပိုမိုဝိညာဉ်ရေးရာချစ်ခြင်းမေတ္တာရရှိရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဖြစ်သည်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကပြောကြားသည်မှာ၎င်းသည်“ စစ်မှန်သောအိမ်ထောင်ရေးလုပ်ရပ်” မဟုတ်၊ ကိုပြု ဟော်ဒင်ဝါဒအတွက်အလားအလာရှိသောကြောင့်မရည်ရွယ်ဘဲအော်ဂဇင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ တစ်ခါတလေမင်းကနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ပြီးခဲ့သည့်ရာစုနှစ်တစ်လျှောက်တွင်ဆရာဝန်သုံး ဦး သည်ကာရီဇာ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအတည်ပြုသည့်စာအုပ်များကိုရေးသားခဲ့ကြသည်။ (Stockham, MD, လွိုက်, MD နှင့် Jensen, MD) ဒီနေ့ခင်ပွန်းသည်အချို့ရဲ့မှတ်ချက်တွေ (ဘယ်သူမှမှမပေးဘူး)
foreplay / အော်ဂဇင်စသည်တို့ကိုဖယ်ရှားခြင်း၏အတွေးသည်စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသည်။ မင်းရဲ့စိတ်ကအဲဒါကိုတိုက်ဖျက်တယ်။ “ ပျင်းစရာကောင်းလိမ့်မယ်။ အိပ်ရာပေါ်မှာအဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းဟုဆိုသော်၊ သင်စမ်းကြည့်ပြီးသည်နှင့်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်အတွက်တော့ပြန်လှည့်စရာမရှိတော့ပါ။ karezza ကိုအသုံးပြု။ ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုမရခြင်းသည်အမှန်ပင်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ကျေနပ်ရောင့်ရဲလိင်မှတဆင့်ဘယ်တော့မှမရောက်ရှိနိုင်ပေမယ့်စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိခြင်းအမြဲတမ်းပိုလိုချင်တပ်မက်တပ်မက်သောစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပုံရသည်။ ဒါကွဲပြားခြားနားတယ် ပိုကောင်းတဲ့စကားလုံးမရှိခြင်းဟာကောင်းကင်ဘုံပါပဲ။ ငါစိတ်ကျေနပ်ပေမယ့်ငါမ။ ငါစိတ်ကျေနပ်မှုမရသည့်အခါကျွန်ုပ်ခံစားရလေ့ရှိသောအရေးတကြီးသဘောထားကိုမခံစားရပါ။ ငါဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တစ်နည်းနည်းဖြင့်ပြည့်ဝသည်ဟုခံစားရပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဆက်ပြီးစည်းနှောင်နေပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်ဟာကာရီဇာလို့ခေါ်တဲ့အရာတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်သုံးခဲ့တယ်။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလုပ်လုပ်သောအနေအထား၊ ကတ်ကြေးအနေအထားကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီး၊ ၎င်းသည်ကြိုတင်မြင်ကွင်းမှထွက်ခွာ။ ကိစ္စတစ်ခုလုံးကိုပူနွေးစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယိုဂျobaရေနံကိုချောဆီအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ မအိပ်ခင်နှင့်မနက်တိုင်းဆက်သွယ်သည်။ ကျနော်တို့ 6-7 နှစ်တာလုပ်နေခဲ့ကြ, ဒါသည်ကြီးလှ၏။ ဇနီးမောင်နှံတိုင်းသည်ဖိအားများ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများ၊ Karezza ငါတို့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်မြင့်မားပြီးအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုသဘောဆောင်သောစွမ်းအင်ကိုနေ့စဉ်ထုတ်လုပ်ပြီးထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်အနုတ်လက္ခဏာများသည်ကြာရှည်မခံနိုင်ပါ။
အစပိုင်းမှာကျွန်တော့်ဇနီးကသူမနှစ်သက်ရာကိုယူပြီးငါ့ကိုမကျေမနပ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့အလျှော့ပေးလိုက်လျော လတိုင်းရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးနဲ့အထူးအခါသမယတွေမှာအော်ဂဇင်တွေရဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းသောအရာကိုမဖျက်ဆီးလိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တတိယအကြိမ်မြောက် squirtless ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ရှိနေသည်။ အများအားဖြင့်တစ်ပတ်ကိုနှစ်နာရီကြာအလုပ်များလေ့ရှိတယ်။ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မည်မျှချစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်မှတ်ချက်ပေးကြသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈ နှစ်အတွင်းမှာကျွန်မတို့လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုပြင်ပမှာလိင်ဆက်ဆံဖို့အခွင့်အရေးရှိခဲ့တယ်။ ငါဘယ်လိုသစ္စာရှိခဲ့သလဲမသိဘူး။ အခုငါ့ရဲ့သဘောထားကငါတို့အိမ်ထောင်အတွင်းမှာဖြစ်နေတာတွေနဲ့ဘာမှမတူနိုင်ဘူးဆိုတာပဲ။
Intriguingly, ကနေဒါသုတေသန မကြာသေးမီက "ကြီးသောလိင်" ယေဘုယျအားဖြင့်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည် မဟုတ် အော်ဂဇင်ကိုအာရုံစိုက်သည်။ သုတေသနပညာရှင်ကမှတ်ချက်ချသည်မှာ“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဟာနည်းပညာဖြစ်တယ်၊ လူအများစုကလက်စွဲစာအုပ်နှင့်ပါးစပ်လှုံ့ဆော်မှုနည်းစနစ်တွေအကြောင်းပိုကောင်းတဲ့အထောက်အထားတွေအများကြီးရှိတယ်။ ” သို့သော်လေ့လာမှုက“ အော်ဂဇင်စ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံလျှင်ကြောက်စရာကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုပြုနိုင်သော်လည်း၊ အော်ဂဇင်မပါဘဲအကောင်းဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုကိုသင်ရနိုင်သည်”
ဒါဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ Karezza သည်အကျိုးအမြတ်များပေးသည်ဟုသံသယရှိခြင်းကြောင့်လျှို့ဝှက်အာရုံကြောဓာတုပစ္စည်းထပ်မံကျသွားခြင်းကိုရှောင်ရှားသောကြောင့် အော်ဂဇင်နှင့်အထူးသဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုသည် (အရသာ) အာရုံကြောဓာတုဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်သည်ညီမျှသောနေရာသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိနေစဉ် ၂ ပတ်အတွင်းဂယက်ထ။ ထွက်စေသည်။ (နောက်ထပ်“အဆိုပါစိတ်ဓာတ်ပြင်းပြ Cycle။ ")
ကနှောငျ့ခဲ့ကြသူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ရှိသူများ Coolidge Effect karezza အထူးသဖြင့်အကျိုးရှိသောတွေ့လိမ့်မည်။ ချစ်သူများသည်ညင်ညင်သာသာချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြုပြီး“ အဆုံး၌” လုပ်သောအခါသူတို့သည်မိတ်ဖက်တစ်ယောက်နှင့်အတူ“ စိတ်ကျေနပ်မှု” မရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကအလားအလာကိုရှောင်ကွင်း အန္တရာယ်များသဘောထားကို ပိုပြီးအော်ဂဇင်နှင့်အတူအားလုံး Post-orgasm ထပ်မံကျ (ပြားချပ်ချပ်, မြင့်စိတ်ပျက်, ငတ်မွတ်သောသူတို့ကို) ကုသပေးဖို့။
အိမ်ထောင်ရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက်ကြိုးစားနေသောစုံတွဲများသည်သမားရိုးကျလိင်မှရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြသော်လည်းချစ်ခင်တွယ်တာမှုနှင့်ရည်မှန်းချက်မထားသည့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပင်ပြုလုပ်ရန်အကြံပြုကြသည်။ (နှစ် ဦး စလုံးစိတ်အားထက်သန်မှုသံသရာအစပျိုးခြင်းမရှိဘဲညင်ညင်သာသာ dopamine နှင့် oxytocin ကိုမြှင့်တင်ပါ။ ) ဤအမျိုးအစား၏ bonding နည်းစနစ်များသည်အပြုသဘောဆောင်သောခံစားချက်များကိုပြန်လည်ရရှိစေသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ "မိတ်လိုက်ခြင်း" နှင့် "နှောင်ကြိုး" အစီအစဉ်များကြောင့် ကွဲပြားမသိစိတ်တစ်ပိုင်းတွေကို။ ဤပconflictိပက္ခဖြစ်စေသည့်အချက်ပြမှု (ပူးတွဲ / ဆွဲဆောင်မှုနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှု / မုန်းတီးခြင်း) ကိုအိမ်ထောင်ဖက်တစ် ဦး ပေါ်သို့တင်ပြသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှုပ်ထွေးစေသည့်အပြင်ထွက်သွားသလိုခံစားမိနိုင်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတိရှိသောစိတ်ထက်နိမ့်သောအဆင့်တွင်ရောထွေးနေသောအချက်ပြမှုများကိုပို့ဆောင်ပေးနေသည်။